galmudugnews.com » Maxaad ka Taqaan Maalgeliyaha Shabaab iyo Maleeshiyo beeleedka Marko
Home » WARARKA » Maxaad ka Taqaan Maalgeliyaha Shabaab iyo Maleeshiyo beeleedka Marko Maxaad ka Taqaan Maalgeliyaha Shabaab iyo Maleeshiyo beeleedka Marko admin on
Apr 5th, 2013 //
No Comment Views 168875Galmudugnews.com- Qaar ka mida Saraakiisha Sirdoonka Somalia ayaa xaqiijiyay in nin lagu magacaabo Abdullahi Ibrahim Cadow maalgelin dhaqaalo siiyo dagaalyahanada Al-Shabaab iyo Maleeshiyo beeleed ka dagaalama gobolka Shabeelada hoose.
Ninkaan oo sheegta inuu yahay Madaxweynaha Udubland ayaa ka mida Saraakiisha Al-Shabaab waaxda loo yaqaan International Intelligence Department Agency.wuxuuna sidoo kale qaabilsan yahay aruurinta lacagaha laga qaado qurba joogta tirada yar ee taageersan Al-Shabaab.
Ibrahin Abdullahi Cadow waxaa maalgelinta Al-Shabaab kala shaqeeya madaxda Hayadaha WFL iyo AYUUB NGO Hassanow Mustaf, Cabdoow Badooly, Siid Cali, Mohamed Mudane iyo Cabdirahin Muse Abshir .
Madaxda labada NGO waxay gacan weyn ka geysteen dagaaladii dhowaan Alshabaabka iyo Maliishiyo beeleedka Biyo maal ka rideen Shabeeladda hoose.
Ibrahin Abdullahi Cadow oo ku dhuumaalaysanayey Muqdisho ayaa ka guuray Hotel Mubarak oo uu deganaa .
Ila wareedyo muhiima ayaa Galmudugnews.com u sheegay in Abdullahi IBrahim Cadow si qarsoodiya uga dhoofay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho,uuna galay Nairobi.
Dhagarqabaha Dilaaga ah Ibrahin Abdullahi ayaa isaga kala goosha wadamada Kenya, Ugandha, Jabuuti, Soomaaliya, Saanbiya, Suudaan iyo DR of Congo,
Ibrahim Abdullahi Cadow wuxuu sheegtaa inuu ganacsade yahay, mararka qaarna wuxuu raacaa tabliiq si si uu iskugu muujiyo inuu yahay nin faafiya Diinta Islaamka.
Dhagar qabe Ibarahin Abdullahi Cadow oo lala xiriirsho inuu lug weyn ku lahaa dil loogu geystay Magaalada Nairobi, Gabadhii u ololeyn jirtay Nabadda iyo Horumarka Istarliin Abdi Arush, wuxuu heystaa dhalashada Mareykanka laakiin lama ogga magaca uu isticmaalo.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa sugaya in dhagarqabayaashaan Cadaaladda la horkeeno Maalin aan dheereyn.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139576 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31892 hitsContact US - 30607 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26171 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25651 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25292 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23902 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23059 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22409 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22380 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21472 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21143 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21135 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20834 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19890 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19881 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19279 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18517 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17826 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17758 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17686 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16909 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16837 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15544 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15493 hits Home Contact US